Kuzobungazwa inkakha yomculi esinde kwiCorona
UNDUDUZO Makhathini uzobe edlala kanje emcimbini wokuqongelela imali wePiano Passion Project Isithombe: NOKUTHULA MBATHA/African News Agency(ANA)
BANGAPHEZU kuka20 abadlali bophiyano abazonandisa emcimbini wokubungaza inkakha yomculi we-jazz uDarius Brubeck ngenhloso yokulekelela isikhungo iDenis Hurley Centre eThekwini ngoMeyi 27 kusukela ngo6 ebusuku.
Kule online concert kuboshelwe amaciko asemazweni ahlukahlukene okubalwa kuwo iNingizimu Afrika, UK, USA neNetherlands. Kubona kukhona uMelvin Peters Burton, Debbie Mari, Nishlyn Ramana (UK), Andile Yenana, Neil Gonsalves, Mark Kilian (USA), Shemual Mahabeer, Sibusiso Mashiloane, Lungelo Ngcobo, John Edwards, Nduduzo Makhathini, Lindi Ngonelo, Zwelihle Kunene, Siyanqoba Mthethwa, Zoe Molelekwa, Susan Barry, Roland Moses, Vincent Mthethwa, Khabelo Witness Matlou (USA), Obakeng Thamage noMike del Ferro (Netherlands).
Lo mcimbi uyingxenye yochungechunge lwamakhonsathi abanjwa masonto enziwa ngokubambisa phakathi kwe-UKZN Centre for Jazz and Popular Music ne-iSupport Creative Business' Music Unlocked Sessions.
Amathikithi aseyatholakala eWebtickets ngoR80, kanti unganikela nanganoma yimalini. Inhlosongqangi ukuqongelela imali yokusiza isikhungo esiphakela abantu abadla imbuya ngothi nabangondingasithebeni enkabeni yeTheku, iDenis Hurley Centre.
Njengoba kuvalwe izwe thaqa, baningi abantu abadilizwa emisebenzini, nabo abazodinga ukutakulwa. Iningi labaculi abazobe bebambe iqhaza kulo mcimbi obizwa ngePiano Passion Project bake basebenzisana kakhulu neDHC emikhankasweni eyedlule futhi bazimisele ngokubuyisela emphakathini kulesi sikhathi esinzima.
Igciwane leCorona lihlaseleli kubadlali bophiyano abayingxenye yePiano Passion Project njengoba selibuya nakuzakwabo uSolwazi uDarius Brubeck, oze wangeniswa nasegunjini labagula kakhulu kangangoba odokotela baze balimisa ngembaba elokuthi awu50/50 amathuba okuthi aphile.
Nakumkakhe, uCathy, isimo sibe sibi kakhulu njengoba naye kuphoqolekile ukuba ayovalelwa yedwa. UNkulunkulu eMkhulu, uDarius uyaqhubeka nokululama futhi usebuyele kwakhe lapho asehleli khona nomkakhe.
Ukusinda kukaDarius nosizi olubhekene nomphakathi yikho okwenze kwanesidingo sokwenza umcimbi wokubonga. Ukulandela imithetho kahulumeni yokungahlangani, yikho okuholele ekwenzeni le khonsathi yaba-online. Ngakho bonke laba badlali baqoshwa kudala ngokwehlukana base behlanganiswa ngobuchwepheshe besimanje.
Ikhonsathi izothatha amahora amabili futhi umdlali ngamunye uzothatha imizuzu emihlanu. Asebekhokhile bazothunyelelwa ama-link lapho bezoyibuka khona le khonsathi ukusuka nokuhlala.
* Abadinga ukuthenga amathikithi bengangena kule-website: www.webtickets.co.za.